thinzar's blog: ကမ္ဘာမြေကြီးအတွက် တစ်နာရီ
ခုနောက်ပိုင်း အခန်းမီးကို မလိုဘူးထင်ရင် မဖွင့်ပဲ ပိတ်ထားဖြစ်တယ်။ ညဘက်ဆို မအိပ်သေးပေမယ့် စာမဖတ်တဲ့အချိန်တွေမှာ မီးချောင်းအကြီးကို ပိတ်ထားလို ့ရရင် ပိတ်ထားလိုက်တယ်။
အရင်ကဆို အခန်းထဲမှာ ကိုယ်ရှိနေတုန်း မီးလင်းထိန်နေမှ ကြိုက်တာ၊ တစ်ခါတလေ မီးဖွင့်ပြီးတောင် အိပ်လိုက်သေးတယ်။
အင်း.. ကွန်မန် ့ရေးပြီး ပိုစ့်ကို နောက်တစ်ခေါက်ဖတ်ကြည့်ပြီး စဉ်းစားမိသွားတယ်။ မီးပိတ်တဲ့ ၁ နာရီအတွင်း... အမှောင်ထဲမှာ ဒုစရိုက်မှု ့တွေများ ဖြစ်အုံးမလား.. စိုးရိမ်မိတယ်။ အရမ်းကြီးတော့ မမှောင်လောက်ဖူး ထင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံလည်း ပါဝင်ဆင်နွှဲမယ် ထင်ပါရဲ့။ :)
17/3/09 4:26 PM
မနေနေနိုင်>> လုံးဝကြီး မှောင်မည်းနေအောင် ပိတ်မယ်လို့တော့ မပြောထားဘူး အစ်မ။ မလိုအပ်တဲ့ မီးတွေကို ပိတ်မယ်လို့ဘဲ ပြောထားတာဆိုတော့ ဘယ်လိုလည်းတော့ မသိဘူး။ အဲဒီနေ့ မြို့ထဲထွက်ပြီး စနည်းနာရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ် :)
ကိုZT>> aha..ဟုတ်တယ်။ တစ်တပ်တစ်အားပေါ့။ :D ၂၀၀၈ခုနှစ်တုန်းက မြန်မာပြည်က ပါဝင်ဆင်နွှဲတဲ့ အရေအတွက်ကို ထည့်တွက်မိပုံမရဘူး။
17/3/09 5:50 PM
Earth Hour ဆိုတာ ဒါကြီးကိုး ခုမှသိတော့တယ်။
18/3/09 1:08 AM
မနေ့တောင် ၆ နာရီတိတိ မီးပိတ်လိုက်မိသေးတယ်။
အိပ်ချိန်လေ။ ကျန်တဲ့အချိန်ကတော့ တယောက်တည်းနေတော့ လင်းလင်းထင်းထင်း နေဖြစ်တယ်။
( သရဲကြောက်တယ်လို့ ထင်သွားဦးမယ် မဟုတ်ပါ၊ မျက်စိအားနည်းလို့ပါ ) :D
18/3/09 9:21 AM
မီးပိတ်ပြီးနောက်တစ်ရက်တော့ သတင်းတွေထဲပါကောင်းမယ်ထင်ပါရဲ့ ။ သဉ္ဖာပြောတာနဲ့စိတ်ဝင်စားလာပြီ။ စောင့်ဖတ်အုံးမှ။
18/3/09 12:14 PM
18/3/09 11:21 PM
သီဟသစ်>> ဟုတ်ပါတယ်။ Earth Hour ဆိုတာ ဒါကြီးပါဘဲကွယ်။ :)
Phyo Maw>> ၆နာရီတိတိဆို နည်းသေးတယ်။ တို့က မီးချွေတာတဲ့အနေနဲ့ တရက် ရနာရီလောက် အိပ်တယ်။ :D
ကြည်>> ဟုတ်တယ်။ သဉ္ဖာလည်း အမြဲလိုလို (သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းတဲ့အနေနဲ့) မီးဖြတ်ထားတဲ့ နိုင်ငံမှာတော့ မထူးဆန်းပေမယ့် ဒီလိုနိုင်ငံတွေမှာဆို ဘယ်လိုနေမလဲ သိချင်တယ်။ အဖော်ရှိရင် မြို့ထဲ သွားကြည့်ရင် ကောင်းမလားလို့တောင် စဉ်းစားနေတာ။
မမကွမ်>> ကိုတိန်းဇော်အေးကို ကျေးဇူးတင်ရမယ် =)
I feel same with you.
အင်း ခုချိန်မှာတော့ ကျနော်လဲ မီးကိုချွေတာနေတယ် ပြောရမယ်။ ရုံးမှာလဲ တစ်နေကုန်နီးပါး မီးဖွင့်စရာမလိုအောင် ပါတ်ဝန်းကျင်က အလင်းရောက်ကောင်းတယ်။
ခုနေနေတဲ့ အိမ်မှာလဲ Air Con မရှိတဲ့အပြင် ကျနော်က ပန်ကာလေလဲ မကြိုက်တော့ အရမ်းပူမှပဲ ပန်ကာ ဖွင့်ဖြစ်တော့တယ်။
အိမ်မှာရှိနေတုန်း တစ်နေကုန် တစ်ညလုံး ကွန်ပူတာ သုံးနေတာတော့ ဘယ်လိုပြောရမလဲ မသိဘူး။ ဟီးဟီး။ မီးတော့ မဖွင့်ဘူးပေါ့နော်။
19/3/09 11:50 AM
19/3/09 11:55 AM
ကိုဇေယျာ>> ကွန်ပူတာ သုံးတာကတော့ no comment ဘဲ။ သဉ္ဖာလည်း အိပ်တဲ့အချိန်က လွဲရင် ကွန်ပျူတာ မပိတ်ဖြစ်ဘူး။
myo>> ကိုတိန်းဇော်အေးပါ။ :D လာဖတ်သွားတာ ဝမ်းသာပါ၏
20/3/09 12:37 PM
ဗမာပြည်က ဒီအပိုင်းမှာတော့ ခေတ်ရှေ့ပြေးနေတာပေါ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်လောက်ကတည်းကိုက တနာရီတောင်မဟုတ်ဘူး တညခြားကို မဖြစ်မနေ မီးကို ပိတ်ပိတ်ထားရတာလေ။ :D
24/3/09 2:50 AM
hehehe.. in myanmar,, not only earth hour.. but everyday is earth day.. coz no electricity :P even earth week sometimes.. and when u go to the village,, even earth month :)
24/3/09 10:46 AM
shanghua>> ဟုတ်တယ်။ ကမာ္ဘမှာ eco-friendly အဖြစ်ဆုံး နိုင်ငံဆု ပေးသင့်တယ်။ :D
အန်တီနယ်လီ>> aha..yeah.. we, Myanmar ppl are prevserving electrical power and help fighting global-warming since many years back and still doing ;-)
25/3/09 4:51 PM
နေအိမ်မီးနဲ. ပန်ကာကို ၁နာရီလောက် မပိတ်ရင် ဆိုးကျိုးတွေကို နဲနဲ လေးတစ်ရောက်တစ်ပေါက်ပြောကြပါလားဗျာ ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ Dolphin တွေလို ပြန်ပြီး မျိုးပွားနိုင်ရဲ. (renew) သားနဲ. စားသုံးသူတွေက အလွန်အကျွန် သတ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့် မျိုးတုံးသလိုဖြစ်သလို ပဲထင်တယ်။ 2011 မတ်လ ၂၅ နေ.မှာ အနဲဆုံး တော့သေချာပေါက်ပန်ကာလေးတော့ပိတ်ပေးမယ်ဗျာ
5/6/10 2:47 AM
အခန်းကို မီး၁ နာရီလောကအမှောင်ချမပေးရင် ဘာဖြစ်မလဲ တစ်ယောက်တစ်ပေါက်ပြောပေးပါလားဗျာ
ပန်ကာကိုတော့ပိတ်ပေးပါမယ်ဗျာ နောက်လာမဲ.2011မတ်လ ၂၅ နေ.မှာ စက်ရုံတွေတော့ Co2 တွေအလွန်အကျွံထုတ်လို. အိမ်တွေ၊ အခန်းတွေကျတော့ကော ဆွေးနွေးပေးကြပါ...
5/6/10 3:15 AM